Uyemukelwa kwi-Online Course Yezimbangela Zokucindezeleka
Noma nini lapho umuntu enza kahle bese kuthi ngokuzumayo aqale ukwenza kabi, agule noma aqale ukwenza amaphutha, kunesizathu esiqondile salokhu. Akukhona nje okudaliwe (amandla athile afihliwe anquma ukuthi kuzokwenzekani). Kukhona into ebangela ukuthi lokhu kwenzeke.
Ngendlela efanayo, lapho umuntu ezizwa ejabule futhi ephumelela empilweni bese kuthi, ngaphandle kwesizathu esingabonakala kalula, aqale azizwe edangele, kungabonakali enza okuthile ngendlela ayekade enza ngayo phambili futhi manje unosizi futhi udangele izikhathi eziningi, umuntu othile noma okuthile kwenze ukuba lokhu kwenzeke.
Kungenzeka ukuthi awukuboni lokhu, kepha kunezinhlobo ezimbili zabantu ezicacile emphakathini—ezinye empeleni zifuna wenze kangcono, kanti ezinye zisebenza kanzima ukuba zikwenze wehluleke. Lababantu ababi bafihla abakwenzayo futhi akukho lula ukubabona uma ungakwazi ukuthi ubabheka kanjani. Kepha bakhona empilweni.
Lokho okudinga ukuba ukwenze ukubona nokwazi ukuthi ngobani ngempela abangane bakho. Bangobani abantu obaziyo, ophila futhi usebenza nabo abafuna wenze kahle ngempela futhi ngobani abantu abazama ukwenza ukuthi wehluleke? Lapho ungaphendula lombuzo futhi wazi ukuthi kufanele ubaphathe kanjani abantu abazama ukukuvimba, ungaqala ukwenza ngcono kakhulu empilweni futhi uzinze, uphumelele uphinde ujabule futhi.
Ubuchwepheshe buka-L. Ron Hubbard kulesifundo buzokunika amathuluzi owadingayo wokusingatha imbangela yokucindezela futhi bukufundise ukuthi ungawasebenzisa kanjani.
1. Umuntu Ongenabo Ubuntu
1.‏1 FUNDA: Umuntu Ongenabo Ubuntu
2. Izimpawu zoMuntu Ongenabo Ubuntu
2.‏1 FUNDA: Izimpawu zoMuntu Ongenabo Ubuntu
3. Isizathu Esiyisisekelo
3.‏1 FUNDA: Isizathu Esiyisisekelo
4.‏1 FUNDA: Ukukhululeka
5. Izimpawu Zomuntu Onobuntu
5.‏1 FUNDA: Izimpawu Zomuntu Onobuntu
6. Isizathu Esiyisisekelo
6.‏1 FUNDA: Isizathu Esiyisisekelo
7. Izincazelo zamagama Asemqoka
7.‏1 FUNDA: Izincazelo zamagama Asemqoka
8. Ukuphathwa kwe-PTS
8.‏1 FUNDA: Ukuphathwa kwe-PTS
9. Ukusingatha noma Ukunqamula
9.‏1 FUNDA: Ukusingatha noma Ukunqamula
10. Thuthuka Uphumelele
10.‏1 FUNDA: Thuthuka Uphumelele
11.‏1 Isivivinyo Esisebenzayo
11.‏2 Isivivinyo Esisebenzayo
11.‏3 Isivivinyo Esisebenzayo
11.‏4 Isivivinyo Esisebenzayo
11.‏5 Isivivinyo Esisebenzayo
11.‏6 Isivivinyo Esisebenzayo